ဘဟားမားအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ကုမ္ပဏီ (sac) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ဘဟားမား sac - အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးကဘဟားမားအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ကုမ္ပဏီ (sac) တဦးတည်းကုမ္ပဏီအတွင်းသီးခြားအကောင့်ကိုဖန်တီးနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ အဆိုပါသီးခြားအကောင့်ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအုပ်စုများ, တည်နေရာနဲ့တခြားသတ်မှတ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးနိုငျသညျ။ တိုင်းသီးခြားအကောင့်အခြားအကောင့်အသစ်များ၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏ liabilities အတူတူကုမ္ပဏီတည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သီးခြားအကောင့်အဓိကကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယေဘုယျအကောင့်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများလွတ်လပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းအကောင့်များ၏ liabilities အခြားသီးခြားအကောင့်များနှင့်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသို့သယ်ဆောင်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
နိုင်ငံခြားသားများတစ် sac ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်တကွလူအပေါင်းတို့၏ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
2004 များ၏အသားအရောင်ခွဲခြား Accounts ကိုကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအထူးကုမ္ပဏီများသည်ဤအမျိုးအစားများကိုထိန်းညှိ။ အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်တစ်ခု sac အတွင်းသီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများမရှိကြပေ။ ဤပညတ်တရားကို "sac အက်ဥပဒေ" အဖြစ်လူသိများ 2000 ၏ဘာမြူဒါအသားအရောင်ခွဲခြား Accounts ကိုကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေနှင့်ဆင်တူသည်။
တစ်ဘဟားမား sac များအတွက်အသုံးပြုသည်
မူရင်း sac ရဲ့ 1990 ရဲ့အတွင်းအာမခံလုပ်ငန်းတွင်စတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အာမခံကုမ္ပဏီများသည်ကွဲပြားခြားနားသောအာမခံထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီကို policyholder များအတွက်သီးခြားအကောင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးအသက်အာမခံထုတ်ကုန် policyholders သူတို့ရဲ့သီးခြားအကောင့်ရှိသည်မယ်လို့တစ်ခုချင်းစီကိုအာမခံထုတ်ကုန်အတွင်းမှာပဲစသည်တို့ကိုမီးအာမခံ, အမှားအယွင်းများ & ပျက်ကွက်အာမခံ, အိမ်ပိုင်ရှင်အာမခံကြေး, ငှားရမ်းသူများအာမခံ, မော်တော်ကားအာမခံကဲ့သို့အပေါငျးတို့သညျအခွားအာမခံထုတ်ကုန်ထံမှသီးခြားအကောင့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခုကြီးမားသောအာမခံကုမ္ပဏီအတွက်အများကြီးရိုးရှင်းတဲ့စာရင်းကိုင်နှင့်စာရင်းအင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦး sac တချို့ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုနေသောခေါင်းစဉ်:
•ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီများသည်သီးခြားအကောင့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုင်ဖို့ sac ပလက်ဖောင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တိုင်းက client သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်သီးခြားအကောင့်ရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကျင်းပကုမ္ပဏီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သီးခြားအကောင့်ရှိပါတယ်။
•ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေကုမ္ပဏီများသည်အစုရှယ်ယာမြောက်မြားစွာအတန်းပါဝင်သောမာစတာရန်ပုံငွေအဆောက်အဦများတည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် sac ရဲ့သုံးပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးထည့်သွင်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်သီးခြားအကောင့်ရှိနိုင်ပါသည်။
•ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီများသည်စသည်တို့ကို, တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို client တစ်ခုချင်းစီကိုပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်သီးခြားအကောင့်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်
•သူတို့၏အကောင့် comingled ဖြစ်လာကြဘူးဒါကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းတစ်ဦးကကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီထုတ်ကုန်များအတွက်သီးခြားအကောင့်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
client များ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်. တစ်ဦး sac အဘို့များစွာသောအခြားအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်။
ဘဟားမား၏ဓနသဟာယဟာဖလော်ရီဒါသော့ချက်များနှင့်ကျူးဘားတို့အကြားအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲထက်ပို 700 ကျွန်းများပါဝင်သည်။ နိုင်ငံရေးအရကြောင့် 1973 အတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ရာသည်၎င်း၏နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူတစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်ပါလီမန်နှင့်အတူတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းပါလီမန်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဘဟားမားအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ကုမ္ပဏီ (sac) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုငျ:
• အဘယ်သူမျှမအခွန်: ဘဟားမားမကော်ပိုရိတ်, ဝင်ငွေ, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်, တံဆိပ်ခေါင်းခွန်, ဒါမှမဟုတ်အခွန်ရှောင်အခွန်ရှိပါတယ်။
• 100% နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: နိုင်ငံခြားသားများတစ် sac ၏ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: sac ရဲ့ သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များအတွက်သီးခြားအကောင့်သို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
• ပိုင်ရှင်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု: သီးခြားအကောင့်ပိုင်ရှင်များအဓိက sac ၏ liabilities နှင့်အခြားသီးခြားအကောင့် '' liabilities အပေါငျးတို့သဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေကြသည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: ပိုင်ရှင်များ '' အမည်များကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။
ကုမ္ပဏီ (sac) အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်များကိုလည်းကောင်းစကားများ "အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်ယင်း၏နောက်ဆက် "sac" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။ ဤရွေ့ကားဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီရဲ့လိုဂို, စာရေးကိရိယာ, စီးပွားရေးကတ်များ, letterhead, လက်ကမ်းစာစောင်, ဝဘ်ဆိုဒ်များ, ဘလော့ဂ်များအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, မြှင့်တင်ရေးဒီဇိုင်းများတွင်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦး sac အဖြစ်မှတ်ပုံတင်မတိုင်မီကတိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကိုကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေပါသို့မဟုတ် IBC အက်ဥပဒေအောက်တွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်နှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိသည့်ကုမ္ပဏီထို့နောက် sac ဖြစ်လာဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လျှောက်ထားသူတစ်ဦးမှတ်ပုံတင် sac ဖြစ်လာမှကုမ်ပဏီမြား၏မှတ်ပုံတင် ( "မှတ်ပုံတင်") နှင့်အတူတောင်းဆိုမှုဖိုင်များကို။ အစိုးရထိန်းညှိထံမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်လျှင်, လျှောက်လွှာကဆိုသည်သဘောတူညီခကျြမြားပါဝငျပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ပြီးရင်အတည်ပြုချက်အပျေါမှာမှတ်ပုံတင်ခြင်းတစ်ဦးလက်မှတ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တစ်ဦး sac ဖြစ်လာဖို့လျှောက်လွှာများပါဝင်သည်ရမယ်:
•a"ကိုခွဲခြား Accounts ကိုကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "sac" အဖြစ်လိုအပ်သောသတ်မှတ်ရေးနှင့်အတူ sac များအတွက်အဆိုပြုအမည်ကား,
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိများကခွင့်ပြုချက်နှင့်မှတ်ပုံတင်ကြေး၏ငွေပေးချေမှုပြီးနောက်, မှတ်ပုံတင်သည့် sac က register လုပ်သွား, မှတ်ပုံတင်တဲ့လက်မှတ်ထုတ်ဝေလျက်, တရားဝင်ပြန်တမ်းထိုသို့သောလုပ်ရပ်များတစ်အသိပေးစာထုတ်ဝေသည်။
ဘဟားမား၏ Securities မှကော်မရှင် ( "ကော်မရှင်") ကနေစာရေးသားခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ•ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်း;
ကော်မရှင်အနေဖြင့်စာရေးသားခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ• Securities မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကုမ္ပဏီများ sac များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှအစီရင်ခံစာများသူတစ်ဦး sac ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
သီးခြားအကောင့် Creating အဓိကခန္ဓာကိုယ် sac ထံမှသီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများဖန်တီးမပေးပါဘူး။
အဓိကကိုယ်ထည် sac ရဲ့ယေဘုယျအကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာတစ်ဦးချင်းအကောင့်ကနေသီးခြားဖြစ်လိမ့်မည်။ အထွေထွေအကောင့် liabilities သာယေဘုယျအကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများမှပေးဆောင်စေနိုင်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားအကောင့်က၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုယင်း sac ယေဘုယျရန်ပုံငွေနှင့်အခြားသီးခြားအကောင့်များမှသီးခြားရန်ပုံငွေအတွက်ကျင်းပရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သီးခြားအကောင့်မဆိုတာဝန်ယူမှုကိုသီးသန့်ပြုလုပ်သီးခြားအကောင့်နှင့်မဆိုအခြားသီးခြားအကောင့်များ၏တာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်ပါတယ်။ အကြွေးသာသူတို့ကတခြားသီးခြားအကောင့်မဆိုနှင့်မဟုတ်ကန်ထရိုက်လွတ်လပ်သောအကောင့်မှငွေပေးချေမှုကိုရှာကွနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ sac ရဲ့ယေဘုယျအကောင့်နှင့်၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို၎င်းတို့၏အကြွေးဆပ်ဖို့အသုံးပြုပါမည်အဖြစ်ထို့အပြင် sac ရဲ့ကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်မြှုတ် liabilities အန္တရာယ်မှာသီးခြားအကောင့်မဆိုထားပါလိမ့်မယ်။
တတိယပါတီနှင့်အတူစာချုပ်များအထူး sac နှင့်၎င်း၏သည်အခြားသီးခြားအကောင့် ဆက်စပ်. အတွက်သီးခြားအကောင့်၏သဘောသဘာဝဖော်ပြရပါမည်။ သီးခြားအကောင့်အတွက် sac ကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အထွေထွေအကောင့်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကောင့်များနှင့်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအတူမပါဝင်ပါဆိုတဲ့အချက်ကို။
sac ရဲ့ဘဟားမားအတွက်အခွန်များ, သို့မဟုတ်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကိုသိုထားသော, ကော်ပိုရိတ်, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်ဝင်ငွေမှဘာသာရပ်မရှိကြပေ။
တစ်ဦး sac များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနှင့် liabilities အားလုံးဖြစ်စေသည့် sac ရဲ့အထွေထွေအကောင့်နှင့်အတူတစ်ခုသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်သီးခြားအကောင့်နဲ့ဆက်စပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
sac ရဲ့လက်ခံနိုင်ဖွယ်စာရင်းကိုင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အလေ့အကျင့်များကို အသုံးပြု. ငွေကြေးနှင့်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားအကောင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများနှင့်၎င်း၏ဝင်ငွေ, အသုံးစရိတ်များ, liabilities နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးထင်ဟပ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များရှိရမည်။ သီးခြားအကောင့်ပိုင်ရှင်တွေအရေးအသားထိုသို့သောအခွင့်အရေးများလည်မဟုတ်လျှင်ဤရွေ့ကားမှတ်တမ်းများကိုနှစ်စဉ်အားလုံးအကောင့်ပိုင်ရှင်တွေဖို့လက်လှမ်းဖြစ်ရမည်။
တိုင်း sac အားလုံးအကောင့်ပိုင်ရှင်များ၏တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်အများပြည်သူကိုမရရှိနိုင်မယ့်ပုဂ္ဂလိကစံချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သီးခြားအကောင့်ပိုင်ရှင်နှင့်အစိုးရသာ sac စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းကိုင်များမှတပါးထိုအမှတ်တမ်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိနိုင်ပါသည်။
တိုင်း sac ကုမ္ပဏီကအသားအရောင်ခွဲခြား Accounts ကိုကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေနှင့်အတူလိုက်နာကြောင်း attesting နှစ်စဉ်ကြေညာချက်များ file ရမည်ဖြစ်သည်။
သီးခြားအကောင့်နဲ့စာချုပ်ချုပ်အားလုံးတတိယပါတီများအားလုံးအရောင်းအများအတွက်တိုင်းစာချုပ်ထဲမှာရေးသားခြင်းအတွက် sac အတွင်းသီးခြားအကောင့်ကြောင်းအသိပေးရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိစ္စလိုပေမည်ရှယ်ယာအမျိုးအစားများကိုသာသက်ရောက်သော IBC အက်ဥပဒေအောက်တွင်မှတ်ပုံတင်များ၏ option ရှိသည်ရဲ့ sac ။
တစ်ဦးက sac တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်များတွင်မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦး sac အဖြစ်မှတ်ပုံတင်မှကြိုတင်, လျှောက်ထားသူဖြစ်စေသည့်ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေသို့မဟုတ်အခြားအပတ်ကယူစေခြင်းငှါအရာ IBC အက်ဥပဒေအောက်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကဘဟားမားအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ကုမ္ပဏီ (sac) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုငျ: အဘယ်သူမျှမအခွန်, 100% ပိုင်ဆိုင်မှု, privacy ကို, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ပိုင်ရှင်တွေသီးခြားအကောင့်အသစ်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အဘယ်သူမျှလိုအပ်တဲ့စာရင်းစစ်များနှင့်တရားဝင်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။